UGqr. Patrick Young, Umbhali kwi-aasraw - Iphepha lama-2 lama-37
ISouth Africa Delivery, iDaily Domestic Delivery, I-European Domestic Delivery
Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones
I-Fat Loss powder
IiReagents zeR & D
Ukuhlolwa kweeLabhu ze-3rd
Yonke into malunga ne-Oxandrolone (Anavar), kuya kufuneka uyazi
UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala .
Yintoni iOxandrolone (Anavar)? I-Oxandrolone (53-39-4), eneAnavar powder njengegama lophawu, sisichiza esenziwe nge-androgen kunye ne-anabolic steroid (AAS) esaziwa kakhulu ngamandla nangokomeleza amandla. Iphakathi kweyona nto aziwa kakhulu kwaye isetyenziswe ngomlomo i-anabolic steroids. I-Anabolic kuthetha ukuba iyanyusa iiproteni zeseli, yiyo ke ekhokelela […]
Isikhokelo sokuthenga esipheleleyo se2019 sokwakha umzimba we-SARM SR9009
I-1.Yintoni i-SR9009? I-SR9009 okanye i-stenabolic sisongezelelo se-CAS 1379686-29-9 esilingisa iziphumo zovavanyo lwe-Cardio. Ayizukuphela ukuba ichiza likuncede unciphise ezinye zeenqatha zomzimba ezigqithisileyo, kodwa liya kukhulisa amandla akho ngelixa lisenza unyamezelo. I-SR9009 sisakhiwo esingumxube, esivele []
Iimbono ezixhaphakileyo kwihlabathi le-anabolic steroids
Oku kuya kuba sisishwankathelo ngokubanzi ngokubanzi seenjongo zolwazi ngokubanzi kuphela, ayisiyo indlela yokukhokela. Oku akuthethi ukuba ndiyakuvumela ukusetyenziswa kwayo okanye ukwamkelwa kokusetyenziswa. IiSteroids zihlala ziqondwa ngokungachanekanga okanye zenziwe ngendlela engalunganga- kukho iintlobo ezahlukeneyo zeesoftware. IiCorticosteroids, ezineziphumo ebezingalindelekanga ezimbi kuneeAnabolic Steroids, ngenxa yesizathu esithile […]
Ngaba i-MK-677 (Ibutamoren) isebenza kakuhle kulwakhiwo lweMisipha? Uphononongo lweSarm [2019 NTSHA]
I-1.Yintoni iMK-677 (Ibutamoren)? I-MK-677 (Ibutamoren) i-powder (159752-10-0) yinto entsha ye-hormone yokukhula kwe-siriagague (GHS). I-hormone yokukhula eyimfihlo luyinto eyenzelwe ukusebenza njenge-secagague yokuncedisa ukunyusa amanqanaba okukhula kwehomoni. Ukukhula kweehomoni kuyimfuneko ukuze umzimba wakho usebenze ngokufanelekileyo. Oku kuya kukunceda ukuba uphucule izihlunu […]
I-10 edume kakhulu kwi-Anabolic Steroids Raws Material
I-10 eyaziwa ngokuba yi-Anabolic Steroids Raws Material Ngokwe-4 yeminyaka yokuthengiswa kwedatha kunye nemibuzo eyahlukeneyo, sishwankathele i-10 eyaziwayo ye-anabolic steroids (AAS) izinto eziluhlaza eziluhlobo lweelebhu, abathengisi kunye nabathengi. Sijonge phantsi izixhobo zokwenza izinto eziphezulu ezingaphezulu zeshishini. Uluhlu olupheleleyo, jonga [...]
uNiki on 2-aminoisoheptane (28292-43-5)
UDkt Patrick Young on Cortexolone 17α-propionate powder
UDkt Patrick Young on I-Cyproterone iphakathi kwePowder (2701-50-0)
UMichael McCoy on I-Cyproterone iphakathi kwePowder (2701-50-0)
Vitaliy on Cortexolone 17α-propionate powder
Iimveliso ezithengisa kakhulu
Cetilistat (Oblean) powder
ikaliwe 2.60 ngaphandle 5
ikaliwe 5.00 ngaphandle 5
Tadalafil (Cialis) powder
ikaliwe 3.36 ngaphandle 5
I-CDP ye-powder powder
Yonke into omele uyazi ngePregabalin
Ngaba u-Orlistat usebenza njani njengechiza lokuLawula ilahleko?
I-Synephrine HCL Powder-Ukutshiswa kwamafutha kunye nezixhasi zokunciphisa umzimba
I-Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) isebenza njani kubaakhi bomzimba
I-Flibanserin ilinceda njani ibhinqa njengeHormone yesini
Ilungelo lokushicilela elinamalungelo okushicilela 2019
UKUTHENGA KUNYE NOKUXOLELA: Le ndawo yeMpahla ithengiselwe uKwenziwa koPhando kuphela. Imigaqo yokuthengisa Faka isicelo. Ayisetyenziselwa uBuntu, okanye oNyango, iZilwanyana, okanye abaNtu.
www.cofttek.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com www.dzanlbb.com